Ukuze ibe yintsha kunye nenhle kokubili kwantambama kwaye ngokuhlwa, kungekho nto efunekayo. Cinga ngokucacileyo malunga nokusa kwakho ekuseni, kwaye ke, ukongeza nje ezimbalwa ezithintelayo, unokuzijika ngokulula ngokuhlwa! Kwaye siza kukubonisa indlela yokwenza umhle, owenziwe ngobumnene kuzo zonke izihlandlo.
Ukutshintsha into ebomini bakho kuhlala kunzima. Kwaye nangona ungakagqiba i-tube ye-remens tonal remedy, kwaye i-lipstick "esindayo" sele isazi kakuhle, kubalulekile ukwenza ukhetho. Ingaba uya kuhamba kakuhle, okanye ulinde. Ukuhlengahlengiswa kwindlela yokwenza kakuhle kungekho nzima kakhulu kwaye kungabi kubizi. Ufuna ukuthenga izinto ezimbalwa "ezikhanyayo": i-gloss lip ecacile, i-tone elula kunye ne-mascara engenamanzi. Ubumba obumnene bubaluleke ngokukodwa kwimozulu efudumeleyo, xa uvakalelo lwentsha kubaluleke kakhulu. Musa ukulibala ngokuthinta isikhumba. Ukongezelela, kuyacetyiswa kungekudala ngaphambi kokusebenzisa ukhilimu wamanzi kunye nokwenza, kodwa nangomhla. Ukuvuya kwesikhumba kunokuba yindlela elula: hlabanisa ijusi yamanzi ngamanzi ukuze ijusi ibe ngaphantsi kwamanzi. Ukucoca ngobuso bakho ubuso.
Ngomhla ofudumele, onelanga, ndifuna ukuchitha ixesha elininzi kunokwenzeka ngaphandle kwendlu. Ngoko ke, emva komsebenzi, udla ngokukhawuleza ukuhamba. Emva kokuba siphucule indlela yethu yokuguqulwa ngokukhawuleza kwentsuku yokunyuka kwemini ngokuhlwa, unokuthi unganakunqunyanyiswa ngemizuzu emithathu nje!
Sigxininisa kwamehlo. Isisombululo esingavamile sobusuku obushushu ngumsizi ohlaza okwesibhakabhaka. Amehlo aBrown abeka ngokucacileyo zonke iintlobo zezityebi eziluhlaza.
Isinyathelo1. Ngentsasa emva kokusebenzisa isiseko esisezantsi, yenza amaconsi kwaye wongeze i-mascara encinane kwi-eyelashes. Ukuba ngokwemvelo unama-eyelashes amnyama, musa ukulinganisela umzobo nge-makeup - sebenzisa kuphela i-vitamin remedy ye-eyelashes. Iibhokhwe zithatha ipensela okanye izithunzi zamehlo.
Isinyathelo2. Sitshintsha i-lipstick evamile yokukhanya. Ndikholelwe, ukukhanya okungafihli okanye umlomo ococekileyo ongcolileyo ulungelelene nomfanekiso wendlela yokwenza kakuhle.
Isinyathelo3. Ukuguqula i-laconic yakho yemihla ngemihla ngokuhlwa kukulula. Beka yonke i-eyelidi ebonakalayo eluhlaza. Sebenzisa i-eyeliner eluhlaza okwesibhakabhaka okanye ipencil eluhlaza kakuhle ukuze udwebe umcibisholo. Ubude kunye nokuguqa kwetolo kufuneka kuxhomekeke kwenkalipho.
Isinyathelo4. Ngokuhlwa, i-rouge iyimfuneko nje, ngoxa uncedo lwakho uya kulukhupha ilanga. Sebenzisa i-red brass, kwaye akukho mntu uya kukholelwa ukuba uchithe usuku lonke eofisini!
Kwindawo yenkcazelo - umlomo. Abazalwana bathanda ama-blondes - le nyaniso amantombazana amaninzi ayawaqonda ukususela ebuntwaneni. Emfanekisweni wentombazana enomnene neyantengantengayo, yiletha ukukhwabanisa okufutshane - yongeza imibala eqaqambileyo emlonyeni wakho.
Isinyathelo1. Ukukhutshwa kweqhwa elimhlophe kuluhlaza - ngokubhekiselele kumva, ukungafezeki kwesikhumba esincinci kubonakala ngakumbi. Kwaye ngama-blondes angokwemvelo, njengomthetho, iinqanawa ziseduze nomphezulu wesikhumba. Ngenxa yoko, ngelilanga elikhanyayo unamaqhinga okukhohlisa. Ngako oko, kufuneka usebenzise umnxepheli weetoni ngokucophelela. Ukuba isikhumba sakho asinakunqwenela ukutyebisa, phezu kwetayela yefowuni ifowuni epholileyo.
Inyathelo 2. Kulo lonke uliso olushukumisayo, sebenzisa izithunzi ezityebileyo zesikhumba sakho okanye enye okanye ezimbini i-dark shades. Uvumelekile ukuba uthengise i-powder shammering powder, kwaye ungayisebenzisa njengethunzi. Ukuze wenze i-sweet-up-nice, khetha i-mascara emdaka engenawo amanzi: ithobisa umfanekiso kwaye ibonakala njengendalo ngokwemvelo.
Isinyathelo3. Ukuguqula i-makeup yakho ngokuhlwa, ingalo enepencil kunye ne-lipstick. Khetha i-shades yakho eyintandokazi. Ukunyamekela umlomo, sebenzisa umlomo kunye nokongeza i-sheen ebonakalayo. Ukuba ulusu lomlomo wakho ludla ngokumisa, sebenzisa njengesiseko somnxeba wokucoceka.
Isinyathelo4. Ukuchukumisa ukugqiba kokuhlwa kwamanzi kusihlazo se-pink hues. Unokukhetha ngokukhuselekileyo umthunzi wokugqithisa ngaphantsi kombala wengubo yakho yokuhlwa yangokuhlwa. Okanye nje ngaphantsi kwemizwelo, ngokwenza i-makeup enhle.
Ukunyamekela ubuso obuhle ebusika
Indlela yokulahla imibimbi ebunzini ekhaya
Izimangaliso zoManzi: Biotherm Aquasourse Everplump
Iigwele kunye nemifuno kunye neFeta ushizi
Uvuyayo kwivesi ngePasika. Imibongo emfutshane ukuvuyisana ngePasika. I-Easter 2016 - Ndiyathokoza-iivesi zamaKristu
Imigaqo yokuziphatha ngexesha lesincoko
I-neurobic i-gymnastics yengqondo
I-Rhinoplasty yindlela yokuhlinzwa
Ukuvakalisa ukutya, indlela yokunciphisa umzimba ngomnyaka omtsha
Yintoni onokuyiphupha ngayo amantombazane?
I-anyanisi e-Caramelised in vinegar
Iifrithi zaseFransi: ezilungileyo okanye ezimbi